Dowladda Puntland oo Garowe ka Furaysa xafiis isku xira bulshada iyo Booliska – Radio Daljir
Abriil 22, 2015 10:53 b 0
Arbaco, Abriil 22, 2015 (Daljir) — Xarunta hoolka shirarka ee gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa lagu qabtay kulan balaaran oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Nugaal loogana hadlayey sidii ay u wada shaqayn lahaayeen ciidamada ammaanka ee magaalada Garoowe iyo qaybaha bulshadu.
Kulankaan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan, saraakiisha ammaanka gobolka, gudoomiyaha gobolka Nugaal, duqa degmada, Isimo, nabadoono, haween iyo qaybaha kale ee xaafadaha magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ee Soomaaliyeed.
Ugu horayn waxaa shirka kahadlay nabadoonada gobolka Nugaal iyo haweenka xaafadaha magaalada Garoowe oo balanqaaday inay lashaqayn doonaan ciidamada ammaanka waxaana ay bulshada ku baraarujiyeen inay gacan ula tagaan cidkasta oo ammaankooda waxyeelaysa.
Taliye kuxigeenka qaybta booliska gobolka Nugaal Kornayl Heeryo oo kahadlay kulanka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Garoowe ay diyaar u yihiin sidii ay uga jawaabi lahaayeen codsi kasta oo kaga yimaada bulshada magaalada, wuxuuna codsaday in bulshadu lashaqayso.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal ahna gudoomiyaha gudiga nabadgelyada gobolka Nugaal Cabdullaahi Ciise Aw-axmed ayaa sheegay in shacabka Garoowe iyo guud ahaan gobolka Nugaal ay ka go’antahay sidii ay ammaankooda nafta ugu hurilahaayeen, aysana aqbali doonin in ammaankooda lawaxyeeleeyo.
Dhanka kalena gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay inay jiraan dad ku faraxsan ammaan xumada Garoowe iyo guud ahaan Puntland, isagoona intaas ku daray in shacabka Puntland gaar ahaan caasimadu ay yihiin dadkii ugu horeeyey ee Shabaabka gacantooda kusoo qabta aysana cidi arrimahaasi ugu caga juglayn karin.